Cali Khaliif oo Xaruntiisii ka raray Saax-dheer una Guuray Balicad | Warsugan News
Home Wararka Cali Khaliif oo Xaruntiisii ka raray Saax-dheer una Guuray Balicad
Cali Khaliif oo Xaruntiisii ka raray Saax-dheer una Guuray Balicad
Buuhoodle(warsugannews)-Hoggaamiyaha kooxda Khaatumo Cali Khaliif Galaydh ayaa ka guuray xaruntii uu hore u degenaan jiray ee magaalada Saax-dheer, waxaanu wixii hadda ka dambeeya xarun ka dhiganayaa magaalada Balicad.
Cali Khaliif, ayaa culays kaga yimid dadka deegaanka ka dib wuxuu go’aansaday inuu fadhiisin ka dhigto magaalada Balicad, waxaanu hadda ku suganyahay magaaladaas ka dib markii uu magaalada Buuhoodle iskaga baxay. Ku xigeenka Cali Khaliif oo isagu jooga magaalada Saaxdheer ayaa isna ku soo jeeda dhinaca Balicad halkaas oo noqon doonta xarunta ay fadhiyi doonaan wixii hadda ka dambeeya.
Cali Khaliif ayaa la aaminsanyahay inuu Saaxdheer uga guuray culayska kaga yimid dadka deegaanka iyo weliba ciidanka qaranka Somaliland oo ku sugan duleedka tuuladaas.
Previous PostArday Somaliland wax ku baratay oo shalay ka qalin jebiyey Jaamacada New Generation looguna qabtay xafladii qalin jebinta Dalka Ehtiopia gaar ahaan xarunta midawga africa Next PostShan iyo Toban xildhibaan oo xukuumada si adag ugu dhaliilay boob ay sheegeen inay hantidii qaranka ku hayso